Hanging steel door cabinet without shelf graphic available. နံရံကပ်ချိတ်ဆွဲနိုင်သော စတီးတံခါးနှင့် ဗီရိုအသေးဖြစ်သည်။ အတွင်းဘက်တွင် စင်မပါဝင်ပါ။
Uni-box Steel door with 1 shelf and keylock. Uni-box စတီးတံခါးနှင့်ပုံးဖြစ်သည်။ စင် (၁)စင်ပါဝင်ပြီး သော့ခတ်နိုင်သည်။
Uni-box with 1 shelf Uni-box စင် (၁)စင်ပါဝင်သည့်စတီးပုံး။ Size: W44*D40.7*H44 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၄၄၊ အနံ ၄၀.၇၊ အမြင့် ၄၄ စင်တီမီတာ